I-China i-agglomerator abavelisi bomatshini be-pelletizing kunye nabathengisi | Oomatshini abazizityebi
Ukuhambisa: dlulisa ifilimu ye-PE PE okanye iiflakes kwi-compactor / feeder. Isixhobo sefilimu se-PE: ukutyumza nokucinezela ifilimu, kunye nefedcompress ifilimu kwi-extruder ngokunyanzelwa, ukwenza amandla emveliso aphezulu kwaye azinzile. Inkqubo eyandisayo: izinto zeplastikhi kunye negesi edinisayo.
Umatshini we-Agglomerator Pelletizing
1.Ukukwazi: 60kg / h-1000kg / h
Uhlobo lwe-2: ikhonkco lokumisa amanzi kunye nohlobo lokuma
iphe pe yefilimu yokuthambisa umgca weplastiki / ifilimu eyenziwe ngeplastiki
Lo matshini wokupholisa amanzi wokwenza umatshini wokwenza iplastikhi yiplletizer yeplastiki, okufanelekileyo ukuba kufanelekile kwiintlobo ezininzi zezinto zokulahla inkunkuma zeplastiki kunye nokwenza i-pellet, njenge-PP, i-HDPE, i-LDPE, i-LLDPE ifilimu i-EVA kunye ne-PE foam kunye nokucoca okuluhlaza / okungalukwanga izinto zebhegi, njl Ifilimu inokucinezelwa kwisiguquli kwaye emva koko icwecwe, awudingi umatshini isityumzi.
Kwaye iphuhlise uyilo oluphucukileyo, iqinisekisa ukuba lo matshini unobomi obude bokusebenza kunye nokusebenza kakuhle kwezoqoqosho ekusebenzeni.a
1. Isikrufu kunye nomgqomo zenziwe nge-38CrMoAlA okanye i-Bi-metallic, umlomo wokungena ophathwe nge-alloy ekhethekileyo: ubomi obomeleleyo nobude.
2.Ukusebenza ngokulula: ine-othomathikhi yokulawula ubushushu kunye nokusebenza okuzinzileyo, Emva kokuhlengahlengisa kakuhle, abasebenzi aba-1 okanye aba-2 banele ukuqhuba lo matshini, ukondla izinto kunye nokutshintsha i-pellet receiver.
3. Ixabiso eliphantsi ekusebenziseni emva kokuyila ngokutsha: ngoku lo matshini onoqoqosho uqoqosho ngakumbi kumthombo wamandla ombane kunye namanzi. Kubomi obude bokusebenza kwalo matshini, unokugcina imithombo emininzi yamandla!
4.Ukuveliswa okuphezulu, ubomi obude bokusebenza kunye nengxolo esezantsi: yeyona plastiki inkunkuma ifanelekileyo ihlaziya umatshini we-pelletizer kule mihla.
Kuwo wonke lo matshini sinamava amaninzi kuwo ngaphezulu kweminyaka eli-10, mhlobo wam, thumela nje i-imeyile, ndiza kukunika ixabiso lesindululo kwaye wenze umnikelo ngokuchanekileyo ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Umatshini we-Agglomerator ngesinqumli sokunkcenkceshela: ukuphinda usebenzise ifilimu ye-PE PP kunye neengxowa eziphothiweyo.
Umatshini wokudibanisa umatshini kwi-PP enkulu yokuxolela umatshini weplastiki
Wonke umatshini, senza ngokwethu ukunciphisa iindleko zabathengi bethu.
Imveliso 2.Genuine kunye Obusemagqabini ubunjani
Sikhetha izinto zethu ezingqongqo kakhulu.
Zonke izinto eziza kumzi-mveliso wethu kufuneka ziphumelele kuvavanyo lomgangatho
Iimpahla ezingekho mgangathweni zibuyiselwa kumthengisi.
3. Ii-engerneers ziyafumaneka ukukhonza phesheya kolwandle
Inkampani yethu ibonelela ngexesha nje lokuhanjiswa konikezelo lwayo lokuhambisa.
5. Ukugcina iindleko
Sithatha ingqalelo enkulu kuzo zonke iinkcukacha kwinkqubo yokuvelisa.
Ulawulo lomgangatho kumzi-mveliso wethu ungqongqo kakhulu.
Zonke izinto ezenziweyo ezineziphene kufuneka ziphathwe kwakhona okanye zikhatywe.
Wonke umatshini kufuneka ujongiwe ngaphambi kokuba uhambise abathengi bethu.
Into esifuna ukuyenza kukunika abathengi bethu imveliso esemgangathweni esemgangathweni kunye nobomi obuzinzileyo nobude busebenza.